Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo doonaya in uu hor fariisto Xassan Rouhani - BBC News Somali
"Waxa aan la kulmaya cid kasta. Waxa aan aaminsanahay kulanka" madxweynaha Mareykanka ayaa sidaasi weriyeyaasha u sheegay isagoo ku sugan aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka.
Mareykanka ayaa shaki weyn ka muujinaya dhaq-dhaqaaqa ay Iiraan ka waddo bariga dhexe. Mareykanka ayaa xulafo la ah Sacuudi Carbiya iyo Israa'iil oo labaduba ah cadowga koobaad ee Iran.
Iran ayaa ka mid ah wadadmada ugo soo saarista badan shidaalka dunida, taas oo dhoofiso shidaal u dhigma balaayiin doolar sanadkasta. Waxa ay durbadiiba dareemeysa cadaadis dhaqaale xumo. Sidoo kale waxaa hareeyay dibadbaxyo looga soo horjeedo sare ukac ku yimid badeecada iyo qiimaha lacagta oo hoos u dhacay.